ओलीले भने- कसैले माग्दैमा अध्यक्ष दिन सकिँदैन ! एमालेका चार विकल्प — OnlineDabali
ओलीले भने- कसैले माग्दैमा अध्यक्ष दिन सकिँदैन ! एमालेका चार विकल्प
काठमाडौं । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको पार्टी एकताले गति लिन सकेको छैन । नियमित उपचारको लागि भन्दै एमाले अध्यक्ष ओली बुधबार बैंकक उडेका छन् । अब ओली माघ २ गते मात्रै स्वदेश फर्किने छन् । त्यति बेलासम्म एकताबारे कुनै छलफल हुनेछैन ।
मंगलबार बसेको एकता संयोजन समितिको बैठकले कार्यदल गठन गरेको छ । तर, उक्त कार्यदललाई एकताबारे जिम्मेवारी नभएर राष्ट्रि सभा निर्वाचिन, सरकार गठन, प्रदेश प्रमुख नियुक्तिबारे छलफल गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
त्यसअघि दुबै पार्टीले आन्तरिक छलफल गरेका थिए । एमालेले स्थायी समिति बैठकमा एकताबारे छलफल गरेको थियो भने माकेले केन्द्रीय सचिवालय बैठक ।
एमालेका एक नेताका अनुसार स्थायी समितिको बैठकमा अध्यक्ष ओलीले पार्टी एकता र सरकार फरकफरक कुरा भएको बताएका थिए । ओलीले पार्टी अध्यक्ष र संसदीय दलको नेता आफै बन्ने संकेत गरेका थिए । उनले अरु नेताहरुलाई जथाभावि नबोल्न समेत निर्देशन दिएका थिए ।
बैठकमा ओलीको आलोचना समेत भएको थियो । नेताहरुले एकताबारे प्रश्न राखेका थिए । जवाफमा ओलीले अरुले जति उफ्रिएपनि केही नहुने बताउँदै सबै नेताहरुलाई सँगै लिएर अगाडि बढ्ने बताए ।
“जुन पार्टीको आकार ठूलो छ । सिद्धान्त बलियो छ त्यही पार्टीको नेतृत्वमा पार्टी एकता हुन्छ” ओलीले बैठकमा भने । उनले आफ्नै पार्टीका नेताहरुले प्रचण्डलाई अध्यक्ष दिन सकिने भनेर सार्वजनिक भए भन्दै आपत्ति प्रकट गर्दै भने, ‘हाम्रै साथीहरुबाट प्रचण्डलाई अध्यक्ष दिने भनिन्छ ।’ कसैले माग्दैमा अध्यक्ष दिन नसकिने ओलीले बैठकमा स्पष्ट पारे ।
त्यसैगरी बैठकमा अध्यक्ष ओलीले उपमहासचिव घनश्याम भुसालले जनताको बहुदलीय जनवादको च्याप्टर क्लोज भयो भनेर दिएको अभिव्यक्तिको आधा घण्टा खण्डन गरेका थिए । बैठकमा अनुपस्थित भुसालको नाम नलिएर ओलीले भने, “केही साथीहरुमा पहिलादेखि नै जनताको बहुदलीय जनवादप्रति नफरत थियो, बेलाबेलामा त्यसमाथि प्रहार गर्थे । अहिले मौका पाइयो भनेर फेरि प्रहार गरेका छन् ।”
बैठकमा ओलीले माकेका अध्यक्ष प्रचण्ड एकताबाट पछि हट्न नसक्ने जानकारी पनि बैठकलाई दिएका थिए । ओलीले भने, “मैले कुरा गर्दा उहाँ प्रतिबद्ध नै हुनुहुन्छ, शंका नगरौँ । पछि हट्ने अवस्था छैन ।” प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईको अभिव्यक्तिको पनि अध्यक्ष ओलीले आयोजना गरेका थिए ।
एकताबारे छलफलमा रहेका यस्ता छन् विकल्पः
यो विकल्पले पार्टीभित्र छलफलको रुपमा प्रवेश पाएको छैन । यसको लागि केही नेताहरुले लविङ गरिरहेका छन् ।
भारतीय दादागिरी तोडियो, अब नेपालीको घरमा चिनियाँ इन्टरनेट
बैंकक उड्‍नुअघि ओलीले भने- कानुनी अप्ठेरो परे डा. केसीलाई सोध्‍दा हुन्छ